Kungenzeka yini ukudala i-backlink yekhwalithi ye-website esanda kusungulwa?
Kungaba nzima ukuthola ama-backlink kuwebhusayithi ye-e-commerce. Noma kunjalo, ungakwazi ukugwema le nqubo yokusebenza injini yokusesha njengoba kuFANELE ngempumelelo yakho yebhizinisi. Kuyinto yeziningi zamabhizinisi ase-intanethi. Kungaba yinkinga ngokukhethekile kwimithombo yewebhu engenawo ibhulogi.
Udinga ukuba ulungele ukuthi inqubo yokwakha isixhumanisi izothatha isikhathi esiningi nemizamo naphezu kokuthi ungazwa ngale nqubo kusuka ku-ejensi ehlukahlukene yokuthuthukisa injini yokusesha. Bathembisa ukwakha iphrofayli yokuxhumanisa eliphezulu kakhulu ngenyanga ngenani elifanele. Noma kunjalo, kufanele uqonde ukuthi konke kuzwakala kuhle kakhulu ukuthi kungabi yiqiniso. Eqinisweni, kuthatha okungenani izinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu kuye ngokuthi i-niche yakho yebhizinisi neyamakethe.
Ekukhanyeni kokubuyekezwa kokugcina kwe-Google, udinga ukuqaphela ngokucophelela izinga le-backlinks oyidalayo. Kudingeka zakhiwe ngokufanele embonini yakho, imithombo ebonakalayo yewebhu. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuhlola ukuthi ngabe iwebhusayithi ijeziswe ngaphambi kwesikhathi noma cha. Ukudala ama-backlink, ungase uqinise izikhundla zakho kukhasi lemiphumela yokusesha noma ubenciphise ukubonisa i-Google ukuthi awuyena umthombo wewebhu onokwethenjelwa.
Lokhu okuthunyelwe kuklanyelwe ukwabelana nawe ngamasu amaqhinga wokuqamba amaxhumanisi asebenza kahle kakhulu emithonjeni ye-e-commerce web.
Izindlela zokudala ama-Backlink quality
Amaphesenti aphezulu amabhizinisi ahluleka ngenxa izindlela eziningi ezahlukene. Nokho, ngemuva kokuhluleka kwabo, izixhumanisi zabo zihlala zikhona. Ababambisene nabo basebenzisana nabo basengxenyeni kubo ngoba abanakho indlela yokwazi la mabhizinisi engekho futhi abeke isikhundla. Amakhasi abo ewebhu ayasebenza, kodwa angenayo inani noma ithrafikhi. Ezimweni eziningi, abahloli bokuxhumana abaphukile abakwazi ukuzithola.
Ukusebenzisa "indlela yokuhamba yabantu," ungasebenzisa amakhasi angatholakali ngenzuzo yakho. Ungayithanda imithombo yewebhu njengeyakho, ukuthola amawebhusayithi afile axhumanisa kubo. Ungacela laba bantu ukuthi baxhumane nabo kuwebhusayithi yakho esikhundleni. Ngokusebenzisa le mboni yokwakha yokuxhumanisa elula eyakhiwe nguBrian Dean (i-Backlinko SEO blog creator), ungakha ukwakha emuva kwekhwalithi kusayithi lakho ngendlela yamahhala neyomzimba.
Umkhiqizo okhulumela isakhiwo sokuxhumanisa
Le nqubo yokwakha isixhumanisi isebenza kunalokho kulula futhi ingasetshenziswa yizo zonke amabhizinisi ase-intanethi angathanda ukudala ama-backlink quality. Konke okudingayo ukuthola ukuthi imiphi imithombo yewebhu isivele isho umkhiqizo wakho kanye nemikhiqizo oyithengisayo, futhi ngomusa ubacele ukuba bafake isixhumanisi sakho somthombo ekubukeni kwabo. Noma kunjalo, ngaphambi kokucela i-backlinks, udinga ukuhlola ukuthi umthombo wewebhu ungaba ithuba elikhulu lokukwakha isixhumanisi noma awufanelekile ukunakwa kwakho. Enye into okudingayo ukuyihlola ukuthi lokhu okukhulunywe ngakho kukhishwa Source .